यसरी निर्माण हुने भयो रजहरमा मेडिकलसहितको ईमर्जेन्सी वार्ड ..
बुधवार, मंसिर १७, २०७७ ०३:१७:०० युनिकोड
शनिवार, भदौ १३, २०७७ सत्यकलम संवाददाता
सागर पोखरेल , भदौ १३ ।
जब मेरो परिवारलाई कोरना पोजेटिभ देखियो त्यसपछि मेरी श्रीमती र छोरीलाई पनि अस्थायी कोरना अस्पताल रजहर ल्याइयो । भदौ ३ गते बिहान ७ बजे दुबैजनालाई एम्बुलेन्समार्फत ल्याउने काम भयो । जब मेरी श्रीमती एम्बुलेन्सबाट झरिन् त्यतिबेला उनी आफ्नो खुट्टाले अडिन सकेकी थिइनन् । उनी एम्बुलेन्सबाट झर्ना साथ मैले उनलाई काँधमा लिएँ । आँसु पुछिदिँदै आँखा खोल्न र खुट्टा टेक्न अनुरोध गरेँ । उनले टेक्न खोजिन तर कामेको खुट्टाले शरीर थाम्न सकेन बिस्तारै उनलाई कोठासम्म ल्याएँ ।
कोरना भाइरस सङ्क्रमणसँग डराउनु नपर्ने र तनाव डरबाट मुक्त हुँदा यसबाट निको हुने शक्ति थप प्राप्त हुने जानकारी गराएँ । विशेष गरी बिहान उठ्ना साथ ब्रस गर्ने, तातो पानीमा मह मिलाएर खाने, नुन पानीले मुख कुल्ला गर्ने, बाफ लिने र दैनिक योग अभ्यास गर्दा कोरनामुक्त हुन सकिने बताएँ । उनको अनुहार बिस्तारै उज्यालो भयो । मलाई पनि केही हल्का महसुस भयो ।
साँझ पर्दै जाँदा उनमा ज्वरो थपिन थाल्यो, कहिल्यै छोरासँग अलग नबसेकोले आत्तिएर हो भन्ने मानियो र सम्झाइबुझाइ गरी खाना खाएर सुत्न अनुरोध गरियो । हामीले जति सम्झाए पनि उनको मनमा त्रास भने कायमै रह्यो । ज्वरो घट्लाभन्दा बढ्दै जान थाल्यो । उनलाई भदौ ४ गते करिब २ बजेदेखि १०३ डिग्री ज्वरो आउन थाल्यो । सोही दिन कावासोतीका अन्य सङ्क्रमित पनि आएकोले म उनीहरूको व्यावस्थापन गर्न लागेँ मलाई सङ्क्रमितहरूको टोली प्रमुख बनाइएको थियो । नयाँ साथीहरूको व्यावस्थापन गरेपछि मैले यस अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विनोद पौडेलसँग श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी गराएँ । उहाँले ज्वरो नघटेको हुँदा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल लैजान सुझाव दिनुभयो । अनि एम्बुलेन्समार्फत उनलाई लिएर म जिल्ला अस्पताल डन्डा गएँ ।
अस्पतालको आइसोलेसनमा रही उपचार गरिरहेँ । २ दिन पुरा हँुदासमेत उनको ज्वरोमा कुनै परिवर्तन आएन । जिल्ला अस्पतालका डाक्टरहरुबाट सेवा लिइ नै रहियो । उनी अझ औषधि र चिन्ताले गर्दा थप कमजोर बन्दै गइन् । अस्पतालमा रगत जाँच गर्न खोज्दा शरीरबाट रगत निकाल्नसमेत स्वास्थ्यकर्मीलाई हम्मेहम्मे भयो । नपरून् पनि किन ? घरमूली (म ) कोरना सङ्क्रमित भएर गएदेखि उनले मुखमा अन्न त परै जाओस् पानीसमेत खाएकी रहिनछन् । म आफू पनि हरेस खाइसकेँ,े सायद उनको मनमा पनि त्यस्तै लागेर होला छोरीलाई बोलाइदिन अनुरोध गरिन् । छोरी उनीसँगै आएर रजहरको आइसोलेसनमा बसेकी थिइन् । मैले मेरो अभिभावक पनि दाइ पनि रेडियोका अध्यक्ष भरत शर्मा पोखरेल र छोरीलाई जिल्ला अस्पताल बोलाउने निधो गरी डाक्टर विनोदसँग अनुरोध गरेँ । उहाँले यस्तो नियम छैन, यदि तपाईँको परिवारलाई सहज हुन्छ भने म 'मेनेज' गर्छु भनेर छोरी र दाइ (भरत पोखरेल) लाई एम्बुलेन्समार्फत जिल्ला अस्पताल पठाइदिनुभयो ।
उहाँहरू जिल्ला अस्पताल आउनुभयो । त्यसपछि मेरी श्रीमतीको अनुहारमा केही फरकपन पनि आयो । जब सुत्ने बेला भयो सबैलाई हुने गरी पङ्खाको समेत व्यावस्था थिएन । मैले पङ्खाको व्यावस्थापन गर्न डाक्टर र अस्पताल सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा गोपाल खनाललाई समेत अनुरोध गरेँ तर पङ्खाको व्यावस्था हुन सकेन । मैले घरमा फोन गरेर पङ्खा ल्याइदिन अनुरोघ गरेपछि मेरो दाइले एक थान पङ्खा किनेर ल्याइदिनु भयो ।
जिल्ला अस्पतालमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन कक्ष पुरानो एम्बुलेन्स राख्ने टिनको छानामुनि निर्माण गरिएको थियो, जहाँ स्वास्थ्य मान्छे एक दिन बसेमात्र पनि बिरामी बन्थ्यो । टिनको छानो, तातो घाम, बाहिर निस्कने ठाउँ छैन, ढोका अगाडि बसी साँझपखको हावा लिन न त कुर्सी नै थियो न त लामखुट्टेले त्यहाँ बस्न सकिन्थ्यो ।
भदौ ५ गते सोही अस्पतालमा उपचार गराइरहेका १ जना साथीलाई कोरना पोजेटिभ देखिएपछि उनलाई पनि हामी भएकै स्थानमा राखियो । उनलाई बेडको व्यास्थापन त थियो फेरि उहीँ समस्या, उनलाई टिनको छानामुनि बस्न परेपनि हावा खान पङ्खाको व्यवस्था थिएन । मैले फेरि अस्पताललाई जानकारी गराएँ डाक्टरसावले हाम्रो खरिद प्रक्रियाअनुसार सरिद गर्नुपर्ने जनाउँदै पङखा व्यावस्थापन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । साथीले पनि घरमै फोन गरेर पङ्खा मगाउनुभयो । अनि मनमनै आफैँले लेखेको समचारप्रति घृणा लाग्यो । मैले केही दिन पहिला जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण भनी समाचार लेखेको थिएँ तर त्यहाँ निर्माण गरिएको आइसोलेसन कक्ष कुनै कैदीबन्दी राख्ने स्थानभन्दा फरक थिएन मात्र थियो त स्वास्थ्य जाँचको व्यावस्था ।
भदौ ५ गते बिहान मेरो परिवारलाई जबरजस्ती भएपनि केही पाइला हिँड्न अनुरोध गरेँ र उनलाई हातमा समातेर अस्पतालको अनुमति लिएर वरपर धुमाएँ । मैले बिरामी भएकी मेरी श्रीमतीलाई बिहानको शीतलमा ८/१० पाइला हिँडाउँदा कोरना सङ्क्रमित अस्पताल परिसर निर्बाद हिँडेछन् भनेर बाहिर हल्ला फिजाएछन् । अस्पताल परिवारले बाहिरबाट फोन आएकाले भित्र बस्न अनुरोध गरे । मैले पनि त्यसै गरेँ ।
बाहिर बस्दा समाजको अपहेलना र तिरस्कार भित्र बस्न पङ्खाको व्यावस्थापन आफैँ गरेपनि लाइन जाँदा पङ्खा नचल्ने समस्या । लाग्थ्यो हामी कतै कैदीको जीवन त कटाएका छैनौँ ? हैन भने बिरामी राख्ने त्यसमा पनि इमर्जेन्सी बिरामी राख्ने स्थानको अवस्था किन यस्तो ?
जिल्ला अस्पतालमा आफूले पाएको दुःख मैले मलाई भेट गर्न पुग्नुभएका सङ्घीय सांसद तिलक महतसँग राखेँ । उहाँले पङ्खा र लामुखुट्टे निर्मुल गर्न गर्नुपर्ने कार्य गर्न अनुरोध गर्नुभयो तर त्यसको सुनुवाइ कतै भएन । अनि मैले मनमनै विचार गरँे बरु रजहरकै प्राकृतिक चिकित्सालयमा इमर्जेन्सी सेवा र मेडिकल वाड बनाए त सबै कुराबाट मुक्त भइन्थ्यो भन्ने लागेर माननीय तिलक महत, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरूमा रोसन बाहादुर गाहा, मा. विष्णु लामिछाने, मा. ओमकला गौतम, मा. जनकलाल श्रेष्ठलाई रजहरको अस्थायी कोरना अस्पतालमै इमर्जेन्सीसहितको मेडिकल वाड बनाउन तुरुन्तै पहल गर्न अनुरोध गरेँ ।
मलाई यो काममा रेडियोका अध्यक्ष भरत शर्मा पोखरेल र सत्यकलमका अध्यक्ष रमेश बस्ताकोटीले साथ दिनुभयो । उहाँहरूले पनि माननीयहरूलाई समेत फोनमार्फत फार्मेसीसहितको इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिइ नै रहनुभयो । भदौ १२ गते गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रोशन बहादुर गाहाकै उपस्थितिमा अन्य सरोकारवालासहितको बैठकले फार्मेसीसहितको इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । सोही दिन बेलुका गण्डकी प्रदेश विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, प्रदेश सभा सदस्यहरू विष्णु लामिछाने र ओमकला गौतम, जिल्ला समन्वय समिति संयोजक चेसराम आलेसहितको टोलीले समेत प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संघीय सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भरत दाजु, रमेश बस्ताकोटी र मेरो स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न फोन गर्नुभएको थियो हामी तीनै दाजुभाइले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएको तर रजहरमा मेडिकलसहितको इमर्जेन्सी सेवा तत्काल आवश्यक रहेको जानकारी गराइयो । उहाँले पनि तत्काल यो काम पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
आज भदौ १३ गते माननीय रोशनबहादुर गाहासहितको टोलीले बसेको बैठकले २० बेडको इमर्जेन्सी सेवा र एउटा मेडिकल रुमसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । यो डायरी लेख्दासम्म कावासोती नगरपालिकाले रु।१० लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । भवनको भोली भदौ १४ गते जिल्लाका सबै माननीय स्थानीय तहप्रमुख सबैले सयुक्तरूपमा शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कहिलेकाहीँ गाउँ समाजमा भन्ने गरिन्छ दुःखपछि सुखका दिन आउँछ । मेरी श्रीमतीलाई यदि थप ज्वरो नआएको भए भोलिको दिनमा समेत यस अस्थायी अस्पतालमा रहेका सङ्क्रमित थप उपचारका लागि अन्य स्थान धाउन नपर्ने भएको छ । यसका लागि सामूहिक पहलको खाँचो छ । सामूहिक दबाबको पनि खाँचो रहेको छ ।
आउनुहोस् सत्कर्मका लागि हामी सबै हातेमालो गरौँ ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, भदौ १३, २०७७, ०९:११:००